Madaxweynaha Puntland oo Garoowe dib ugu soo noqday kadib markii uu kasoo qaybgalay shirka madasha qaran - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaPuntlandMadaxweynaha Puntland oo Garoowe dib ugu soo noqday kadib markii uu kasoo qaybgalay shirka madasha qaran
Madaxweynaha oo salaamaya ku-xigeenkiisa markii uu kasoo degay garoonka Kanooko. Sawirka: Xafiiska warbaahinta madaxweynaha.
Garoowe-(Puntland Mirror) Madaxweynaha dowlada Puntland Cabdiweli Maxamed Cali iyo wefdi uu hoggaaminayo ayaa maanta oo Arbaco ah dib ugu soo noqday caasimada Puntland, Garoowe.
Madaxweynaha ayaa ka yimid caasimada Soomaaliya, Muqdisho, halkaas oo uu uga qaybgalay shirka madasha qaran ee u dhaxeeyay hoggaamiyaasha siyaasada Soomaaliya oo shalay galab oo Talaado ahayd Muqdisho lagu soo gabagabeeyay.
Madaxweynaha iyo wefdigiisa ayaa waxaa kusoo dhaweeyay garoonka Kumeel gaarka ah ee Kanooko Madaxweyne ku-xigeenka Puntland Cabdixakiim Cumar Camay iyo saraakiil kale oo dawlada ah.